Aza manararaotra ny fahasoavana - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
lahatsoratra > Ny fahasoavan'Andriamanitra > Aza manararaotra fahasoavana
Efa nahita zavatra toy izao ve ianareo taloha? Ity no antsoina hoe hazo-nickel [5-centime piece]. Nandritra ny Ady Amerikanina sivily, ny kitay hazo toy izany dia navoakan'ny governemanta fa tsy ny vola madinika mahazatra. Tsy toy ny vola madinika, fa tsy misy lanjany ireo. Rehefa nandia ny krizy ny toekarena amerikana dia very ny tanjony. Na dia nanana tombo-kase sy ny habeny mitovy amin'ny vola madinika mitentina aza izy ireo, izay rehetra mbola tompony ihany no mahalala fa tsy misy dikany izy ireo.
Fantatro fa indrisy fa afaka mijery ny fahasoavan’Andriamanitra amin’izany fomba izany koa isika. Fantatsika ny fihetseham-pon'ny zavatra tena izy ary raha toa ka misy vidiny izy ireo, saingy indraindray dia mionona amin'izay tsy azo lazaina ho endrika fahasoavana mora vidy, tsy misy vidiny ary mamboly. Ny fahasoavana atolotra antsika amin’ny alalan’i Kristy dia midika fahafahana tanteraka amin’ny fitsarana mendrika antsika. Mampitandrina antsika anefa i Petera hoe: “Miaina amin’ny fomba afaka, fa tsy toy ny manana fahafahana ho lamban’ny faharatsiana” (1 Pet 2,16).
Miresaka momba ny fahasoavana an-kitapo izy. Endrika fahasoavana izay ampiasaina ho toy ny fialan-tsiny mba hanamarinana ny fahotana maharitra; tsy momba ny fitanisa azy ireo amin'Andriamanitra izany mba hahazoana fanomezana ny famelan-keloka, na hanatona an'Andriamanitra amin'ny fibebahana, hangataka fanampiana azy ary noho izany hanoherana ny fakam-panahy sy ny fiovana ary ny fahalalahana vaovao amin'ny alàlan'ny heriny za-draharaha. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia fifandraisana izay manaiky ary manavao antsika amin'ny endrik'i Kristy amin'ny alàlan'ny asan'ny Fanahy Masina. Nanome antsika fahasoavana be Andriamanitra. Tsy mila mandoa azy isika na tsia. Saingy ny fitiavantsika ny fahasoavany dia ho tianay; indrindra indrindra, ny vidin'ny avonavontsika.
Ny fahotantsika dia misy fiantraikany lalandava amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fiainan'ireo manodidina antsika, ary amin'ny tsy fahatomombanana ataontsika dia tsy miraharaha azy ireo.Ny ota dia manelingelina ny mahasoa antsika hatrany amin'ny fisakaizana am-pifaliana sy milamina ary fiarahana amin'Andriamanitra. Ny fahotana dia mitarika antsika amin'ny fivoarana ara-drariny ary mitondra fanamarinan-tena. Ny fanararaotana tafahoatra amin'ny fahasoavana dia tsy mifanaraka amin'ny fiainana tsy tapaka amin'ny fifandraisan'Andriamanitra izay nahatonga azy ho antsika ao amin'i Kristy. Fa kosa mandingana ny fahasoavan'Andriamanitra.
Ny tena ratsy indrindra dia ny fahasoavana mora vidy ny tena lanjan'ny fahasoavana, izay no sarobidy indrindra eto amin'izao tontolo izao. Sarobidy tokoa ny fahasoavana natolotra tamin'ny fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy, ary Andriamanitra mihitsy no nanolotra ny fiainany ho avotra ho azy. Natao ho azy ny zava-drehetra, ary raha mampiasa izany ho fialan-tsiny isika, dia toy ny mandeha manodidina ny kitapo hazo-nikelin-kitapo ary miantso ny tenantsika ho mpilatsaka an-tapitrisany.
Na inona na inona ataonao dia aza mampiasa fahasoavana mora! Sarobidy tokoa ny fahasoavana marina.